Welcome to baidoanews.com | Tallaabo ay dowladdu qaadday oo saamayn culus ku yeelatay dhaqaalaha Muqdisho
Tallaabo ay dowladdu qaadday oo saamayn culus ku yeelatay dhaqaalaha Muqdisho
Thursday April 20, 2017 - 14:39:40 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Ganacasatada qaadka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay maanta sameeyeen shaqa-joojin aad looga dareemay dhammaan suuqyada qaadka ee magaalada, iyaga oo tallaabadoodaasna ku sheegay mid ay ugaga jawaabayaan cadaadis la saaray.
Diyaaradihii qaadka keeni jiray garoonka Aadan-cadde ayaa maanta baaqday, waxaana suuqyada lagu iibinayaa qaad tiro yar oo kuwii shalay ka haray, kaas oo lacag tiro badan la siisanayo.
Qaar ka mid ah ganacsatada qaadka iibiya ayaa shaqa-joojinta ay sameeyeen waxa ay u sababeeyeen qaadkii magaalada soo degi jiray oo canshuur badan la dul-saaray, arrintaas oo ka dhalatay cadaadis ka yimid qolooyin guddi ah oo ay ku sheegeen dullaaliin u dhaxaysa ganacsatada iyo shirkadaha qaadka keena.
Warar hoose ayaa sheegaya in qolyaha la shaqeeya shirkadaha diyaaradaha ay billaabeen in ay caqabad ku noqdaan ganacsatada qaadka, ka gadaal markii ay ka caroodeen go’aan ay dowladda Soomaaliya ku gaartay in lacagaha ka soo xarooda qaadka toos loogu soo gudbiyo wasaaradda maaliyadda.
Wasaaradda maaliyadda ayaa daba-gal ay samaysay waxa ay ku ogaatay in lacagaha ka soo xarooda qaadka ee dowladda soo gaara ay aad uga yar yihiin lacagaha rasmiga ah ee ganacsiga qaadka laga helo, waxaana ogaashaha arrintaas ay wasaaradda ku riixday in ay billowdo la-socoshada ganacsiga qaadka iyo soo-dejintiisa, arrintaas oo dhuun-qabad ku noqotay dad si dadban uga macaashi jiray qaadka soo dega.
Qaar ka mid ah diyaaradaha qaadka ee Muqdisho imaan jiray ayaa maanta u wareegay dhanka Jowhar, halkaas oo qaad ka badan intii soo gaari jiray uu maanta tegay.